Malaysiya oo hogaanka loo doortay hogaamiyaha ugu da’da wayn ee caalamka – Radio Daljir
Maajo 10, 2018 3:52 b 0
Mahathir Mohamad oo noqonaya hogaamiyaha ugu da’da wayn ee xil loo doorto ayaa ku guulaystay doorashadii kadhacday dalka Malaysia.
Hogaamiyahan oo horay raysal wasaare usoo noqday da’ ahaana jira 92- sano ayaa kasoo baxay marxalad howlgab ah oo uu ku jiray, isagoona doorashadiisa ay noqotay mid la yaab ah caalamka oo dhan.
Mahathir ayaa ka guulaystay Najib Razak oo musuqmaasuq lagu eedeeyey, kaasi oo xisbigiisa Barisan Nasional (BN) uu xukunka hayay tan iyo sanadkii 1957dii markii dalka uu xurnimada qaatay.
Mr Mahathir ayaa sheegay isbahaysiga uu hogaaminayo inay soo celinayaan sharciga dalka, iyadoona raysal wasaaraha laga guulaystay Najib oo wax war ah kasoo saarin doorashadan cajiibka ee dalka kadhacday.
Saraakiisha doorashada ayaa soo bandhigay xisbiga mucaaradka ee Pakatan Harapan ee isbahaysiga ah inuu ku guulaystay 113 kursi oo oo ka mid ah 222 kursi.
Mahadthir ayaa sheegay inuu ku faraxsanyahay doorashada, isagoona u mahadceliyay taageerayaashiisa, isagoona rajjo ka muujiyay xafladda dhaarta inay dhacdo maanta oo Khamiis ah.
Raysal wasaaraha mar kalle la doortay ayaa lagu xasuustaa inuu ahaa aabaha hormarka Malaysiya gaar ahaana xiligii raysal wasaaraha uu ahaa 1981-2003dii, isagoona sabab u ahaa hormarka ay gaartay dowladda Malaysia.